Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » Abathwali beenqwelomoya baseMelika babonwe kwintlango yaseTshayina
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abathwali beenqwelomoya baseMelika babonwe kwintlango yaseTshayina.
Ubudlelwane phakathi kwe-US-China buye bawohloka kakhulu kwiminyaka yakutshanje kwimiba esukela kurhwebo kunye nobuntlola ukuya kuhlaselo olukhohlakeleyo lwaseTshayina kwinkululeko yedemokhrasi eHong Kong kunye nezoyikiso zaseTshayina eTaiwan.
I-China yakha ubungakanani obupheleleyo bokuhlekisa ngeenqanawa zokulwa zaseMelika ukuvavanya imijukujelwa yayo yokulwa neenqanawa.
Intlekisa yenqwelo ethwala inqwelomoya yodidi lweFord yase-US kunye nezitshabalalisi ezimbini zodidi lwe-Arleigh Burke eziboniweyo.
Ezi ntlobo zeenqanawa zase-US zihamba rhoqo kufutshane namanzi aseTshayina kwaye zijikeleze iTaiwan.
The Iziko lomkhosi wamanzi waseUnited States (USNI) ipapashe oko yayikutshoyo yayiyimifanekiso yesathelayithi yeethagethi ezipheleleyo ezikwimilo yenqwelomoya yenqwelomoya yeFord yase-US kunye nobuncinci ababhubhisi bemijukujelwa abakhokelwa yi-Arleigh Burke. Iifoto zinikezelwe yinkampani yemifanekiso yesathelayithi iMaxar.
Iintlobo ezifanayo zeenqanawa zemfazwe zaseMelika zihlala zihamba ngenqanawa kufutshane namanzi aseTshayina kwaye zijikeleze Taiwan.
Umkhosi waseTshayina ubusenza iikopi ezinobungakanani bobomi beenqanawa zokulwa zase-US kwindawo yokuvavanya imijukujelwa, USNI Ingxelo ithi.
Ngokuka-USNI, ekujoliswe kuko okumilise umthwali kwaqala ukwakhiwa kwintlango esemantla e-Xinjiang e-China phakathi kuka-Matshi no-Epreli ka-2019, emva koko yachithwa kakhulu ngoDisemba waloo nyaka. Ukwakhiwa kuphinde kwaqala ngasekupheleni kukaSeptemba walo nyaka kwaye kwagqitywa ekuqaleni kuka-Oktobha, itanki yokucinga yathi.
Ngaphandle kokona kujoliswe kuko okumilise okuphambili, ingxelo ithe kukho ezinye iindawo ezimbini ekujoliswe kuzo ezifana nenqwelomoya ngenxa yolwandlalo lwazo. UMaxar uthe isiza siqulethe iithagethi ezimbini ezixande malunga neemitha ezingama-75 (iinyawo ezingama-246) ubude ezazixhonywe kwiintsimbi.
Abathwali beenqwelomoya kunye neenqanawa ze-Arleigh Burke-class ziyinxalenye ye-US 7th Fleet, iinqanawa zayo eziye zahamba kufuphi nemida yaselwandle yaseTshayina, kuquka namanzi ajikeleze iTaiwan, kwaye yathatha inxaxheba kwiindlela zokulwa neJapan, iSouth Korea, kunye nePhilippines.
Ngokutsho kwabahlalutyi bezomkhosi, ngokubeka iithagethi kwindawo ecacileyo kwiisathelayithi zangaphandle, iBeijing yayizama ukubonisa iWashington into enokwenziwa yimikhosi yayo ejulwayo.
Xa ebuzwa ngalo mbandela ngoMvulo, isithethi seSebe lezangaphandle laseTshayina uWang Wenbin uthe wayengazazi iingxelo malunga nemifanekiso yesatellite.
Ngo-Agasti ka-2020, i-China yavavanya i-DF-26 kunye ne-DF-21D imijukujelwa yokulwa neenqanawa ezinde, ebizwa ngokuba “ngababulali abaphetheyo” ngabahlalutyi abathile.
Ubudlelwane phakathi kwe-US-China buye bawohloka kakhulu kwiminyaka yakutshanje kwimiba esusela kurhwebo kunye nobuntlola ukuya kuhlaselo olukhohlakeleyo lwaseTshayina kwinkululeko yedemokhrasi eHong Kong nakwizoyikiso zaseTshayina. Taiwan.